Ngokuvamile uma uthenga imoto nalo umnikazi esizayo bebhekene nenkinga yokususa amalebuli isetshenzisiwe umnikazi odlule. Lokhu kungase kube uwuphawu iqembu lomculo, ulwazi zokukhangisa, nokuningi. Kodwa inkinga kube nzima yokuthi kokokunamathisela ngokuhamba kwesikhathi ngokoqobo udla ku ebusweni ingilazi. Esihlokweni lanamuhla sizoxoxa kanjani ukususa ngokushesha sticker kusukela ingilazi by izindlela eziningana.
Mhlawumbe ngamunye wethu wazama uyenze isebenze ifilimu, ngokuthinta onqenqemeni the nail. Lona khetho nephephile. Kodwa ngokuvamile sticker bome ukuze zisuswe nje ungqimba LCP noma ingilazi. Yiqiniso, akekho ofuna ukumosha ukubukeka umshini. Abanye abanikazi aye ayisebenzisa kaningi indlela usebenzisa ukudla. Lokhu kungaba ucezu ihhovisi noma insingo. Kodwa kungani kungafanele asebenzisa le ndlela? Iqiniso lokuthi ukudla abukhali eshiya imihuzuko eqinile. Futhi kwenzeka hhayi kuphela emzimbeni kodwa futhi phezu ingilazi (elinendawo ubulukhuni kakhulu ngaphezulu).
Ngaphambi kokuthi ususe sticker kusukela ingilazi, kufanele ofakwe izinto eziqinile. "Ngo-ezomile" ngalutho ngeke zisebenze. Razor nje ushiye imihuzuko esihle futhi wenze Ukudilizwa isici ngisho isikhathi esiningi esiningi. kakhulu Indlela kancane kuyingozi ukwedlula ukudla. Ngemva insingo unawo amandla anjalo projection egqamile. Futhi ngeke kuyilimaze ingilazi uma kwenzeka nengcindezi enamandla. Kodwa izinkinga wukuthi ukudla ngokushesha imizwa. Uma une ukususa sticker kusukela ingilazi (indlela yokukwenza - ukubheka elilandelayo) yobukhulu enkulu, le ndlela ngeke isebenze. Ngaphezu kwalokho, kudingeka acabangele ukushuba we stickers. Uma kuwukuthi kakhulu obukhulu insingo blunt kakade emva komthamo wokuqala. Ngakho-ke, le ndlela kuyafaneleka ukusebenzisa kuphela ezindaweni ezincane.
Amanzi futhi vinyl
It wagomela ukuthi ilebula kungenziwa wageza off ngamanzi. Kodwa imikhiqizo vinyl kukhona i-glue olukhuni kakhulu ukuthi olumelana ukushisa nokubanda okukhulu. Futhi uthele amanzi abilayo kuyingozi kakhulu - ungathola ufa. Ngakho-ke, le ndlela, futhi, ngeke sikwenze.
Lena indlela nephephile yokususa Isitika kusukela iwindi lemoto. Ngaphansi isenzo umoya oshisayo kokokunamathisela eshintsha impahla yayo. Ngenxa yalokho, i-vinyl okuyingxenye kungenziwa kalula isuswe ngu prying umunwe wakhe. Ukuze umphumela engcono kutuswa ukusebenzisa ibhilidi umshini wokomisa izinwele. Kodwa ukungabi suit anjalo kanye ekhaya (nje ukuthatha isikhathi esengeziwe). Indlela ukususa stickers kusukela ingilazi? Zonke elula kakhulu. Okokuqala kufanele kulungele ebusweni cishe imizuzu emihlanu. Zama ukusingatha zonke amalebula onqenqemeni. Gcina ibanga elincane, ukuze singathwesi overheat ingilazi uqobo. Uma Tinting isicelo kuthabathela ecaleni reverse, uthathe amakhefu. Kusukela ifilimu umane ukushisela. Ngemva inhlaka isibe ashisayo, imininingwane ngobumnene poddevat Region uzipho noma bushelelezi plastic.
Sicela uqaphele ukuthi eminyakeni ukusetshenziswa kwamanzi vinyl kungaba shwabanisa. Sticker embozwe ukuqhekeka okuncane. Yesilinganiso kubo kunzima kakhulu ukubona. Kodwa ungakwazi ukugqashula amalebula uyaxebuka off ingxenye workpiece. Ngakho-ke, thina uyisuse ngokucophelela, ngaphandle jerks okungazelelwe noma creases. Uma ilebula kunzima, thatha izandla uboya kanyekanye okusalile evuthayo yokuxhuma impahla.
Uma kungekho dryer izinwele
In the ukungabikho isibani ezinjalo ingasetshenziswa. Kukhula amandla alo, ngcono. Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi isibani enamandla (200 Watts) kungaba oplavit ingaphakathi ingilazi uma kwenzeka toning. Ngakho-ke, njengoba kwaba njalo endabeni nge dryer izinwele, dedani yakho. Indlela ukususa sticker kusukela amafasitela imoto? Ukuliqaqa kuyafana. Okokuqala, sihlasela onqenqemeni, bese ukususa isici ngaphandle jerks ebusweni.
Ngokuvamile emva Ukudilizwa Isitika kusala shagreen ebusweni. Akunakusetshenziswa musa uyisuse Blade noma ngezinye izindlela ususondele. Ukuze ahlanze ingcina, kubalulekile ukusebenzisa kuphela. Ovelele "Antisilikon" ngalezi zinhloso. Iqukethe imimoya amaminerali, kanye nezinye izithasiselo kweso ziyoncibilika inhlaka ubudala. Kusho kahle kakhulu ukwedlula uphethiloli noma nge-vodka. "Antisilikon" kufanele zisetshenziswe indwangu ethambile futhi ukusula ingxenye ingilazi. Sicela uqaphele ukuthi iyithuluzi elinamandla - ngesikhatsi kokuhlinzwa kubalulekile ukusebenzisa amagilavu injoloba kanye ngomshini. Njengoba ukususwa ingcina kusukela LCP, kuyafaneleka into eyodwa. Futhi indlela Ungasusa inki ungqimba, noma akuzange kusetshenziswe kule mboni. Ngakho kuqala, thola ukuthi kwathiwa ngesineke ebusweni umzimba kukuwena. On ifektri LCP "antisilikon" izenzo ngaphandle kwemiphumela. Kungenjalo, uketshezi ingasetshenziswa ukuvenisha ukususwa. Iqukethe acetone kanye nezinye izinto ezinamandla. Kusho kahle kususa iminonjana ingcina ubudala. Lolu ketshezi okumele asetshenziswe phezu indwangu ethambile, wagcoba phezu iphathwa endaweni ipherimitha.
Lapho beqeda umsebenzi, kuyinto efiselekayo ukukhiqiza sekugcineni ukukhanya. Futhi endabeni ingilazi - zihlanzwe utshwala ezisekelwe. Khona ungaqala ukusebenza okugcwele. Yini na? Iqiniso liwukuthi phezu emva kokukhipha amalebula ahlale izithunzi. Vinyl ebusweni eqala zonke esingu emisebe yama-UV, kuyilapho okusele is phansi LPC ezintweni ezingezinhle. Ngenxa yalokho, indawo ngaphansi ilebula isuswe iphephile kakhudlwana futhi acacile kunaloyo lotfolwa ngibo bonkhe emzimbeni. Yiqiniso, umehluko onjalo ungcolisa ukubukeka emotweni. Kwenzeka okufanayo ne ingilazi. Ngakho-ke, ngenxa abushelelezi kungenzeka kushintsha, sincoma ukusebenzisa sula. Akunjalo ngempela ukuthi athile. Ukuze wokucwebezelisa, sebenzisa indwangu ehlanzekile noma embuthanweni wazizwa. Kulo mBhalo ufuna ukusebenzisa Sander ekhoneni. Kodwa khumbula ukuthi ijubane ngaphezulu, ayanda ukushisa. Akubalulekile ukuba ucindezele kakhulu phezu kobuso. Kungcono bathuthukise ngayo amacebo ambalwa.
Kukhona izindlela eziningana kanjani ukususa stickers kusukela ingilazi:
Sebenzisa uketshezi ukususa lodonga. Faka isicelo zidwedwe kangcono futhi ukulinda kuze kube imoto elihlale ngokuphelele. With zenjoloba noma spatula plastic (kubalulekile ukuthi wayengeyena nje imiphetho ebukhali) ukususa isici.
Ususe Isitika kusukela iwindi lemoto? Ungazama ithuluzi WD-40. Okulandelayo, udinga ukulinda kuze kube imoto liqala ukwenza izinto bese ziqala ahlukanisa ifilimu. Futhi, kungenzeka lokhu ejenti kuhlangene hairdryer - cwilisa Isitika, bese reheat yona lokushisa eliphezulu. izinsalela ingcina ziyasuswa uviniga.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukususa kalula sticker kusukela ingilazi. Yiqiniso, indlela engcono kakhulu - ukusebenzisa salokhu amathuluzi ezikhethekile. Omunye walena uwukuba le remover yezitikha Cleanextreme Aufkleber. Leli thuluzi angathengwa ruble 1000. Bayidayise ngendlela isifutho. Umuthi ngokuphelele kususa ungqimba ingcina. Ngakho, sticker angasuswa ngesikhathi, ngaphandle ukulahlekelwa futhi kabusha ukucubungula.
Kurgan-Tube - edolobheni ezithakazelisayo kakhulu e Tajikistan